တောင်ဥက္ကလာပမှ အမိုက်စားဆိုငလေးများ – LOOFY
Home › Articles › တောင်ဥက္ကလာပမှ အမိုက်စားဆိုငလေးများ
စားရမယ့်ဆိုင် သောက်ရမယ့်ဘားတွေ ပုံအောနေလို့ ဘယ်သွားရမှန်းမသိ ခြေလှမ်းတွေပျောက်နေတတ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာက ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တွေ
အတွေးမမှားဘဲ အပြေးသွားသင့်တဲ့နေရာလေးတွေကို ဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်..
တစ်ပုံချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ ဆိုင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို သေချာလေးရေးထားပေးတယ်နော်
ဒီ La La Lah Grill & Pot ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာက Premium Buffet 13500 ကျပ်နဲ့ Standard Buffet 11000 ကျပ်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ်
ဒီ ၂ မျိုးက ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ Standard Buffet က ဟော့ပေါ့သီးသန့်ပဲစားချင်သူတွေအတွက် ဖန်တီးပေးထားတာ Premium Buffet ကတော့ ဟော့ပေါ့ရော အကင်ရော ၂ မျိုးလုံးဆွဲလို့ရတယ် ဈေးကလည်း သိပ်မကွာဘူးဆိုတော့ မင်မင်သဘောအရဆိုရင် Premium Buffet ကိုပဲပိုပြီး Recommend ပေးချင်တယ် ပိုတန်လို့ ဘူဖေ’ ၂ မျိုးလုံးကတော့ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲ တမုန်းဆွဲလို့တယ်
ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ဘူဖေးဆိုင်တော်တော်များများလို Appetizer တွေနဲ့ အသားတွေကို အရှေ့မှာ ခင်းမပြထားတာမဟုတ်ဘူး။ Appetizer တွေဆိုလည်း ကိုယ်စားချင်တာတွေကိုပဲ စားနိုင်သလောက်အရင်မှာ ၊ ပြီးမှ ပူပူနွေးနွေး ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ပြီးလာချပေးတာဆိုတော့ စားရတဲ့အရသာကအစ ကွာတယ်
Hot Pot အတွက် ဟင်းရည်အရသာက ခရမ်းချဉ်/ Original/ မီဆို/ တုန်ယမ်း/ မာလာအစပ် ဆိုပြီး ၅ မျိုးရတယ်။ အသားတွေမှာဆိုရင်လည်း ကြက်၊၀က်၊အမဲ အပြင် ၀က်နှလုံး၊ အူ၊ အသည်း၊ ကြက်အသည်းအမြစ်တွေကအစရတယ်အသီးအရွက်တွေဆိုလည်းစုံတယ် Meatball တွေဆိုလည်း6မျိုးလောက်ရှိလောက်တယ်
အကင်အတွက်ဆိုရင် ကင်စားဖို့အတွက် ကြက်၊ ၀က် နဲ့ အမဲသားတွေကို အချိုအစပ် အရသာနှစ်မျိုးနဲ့ သီးသန့်ရှယ်နှပ်ထားပေးသေးတယ် Appetizer ဆိုလည်း ၁၀ မျိုးကျော်လောက်ရှိပြီး အချိုပွဲဆိုရင် Pepsi, Sprite ရယ်၊ ရေခဲမုန့် ၃ မျိုးရယ် နဲ့ သင်္ဘောသီး၊ ဖရဲသီး အ၀ကြိတ်ပဲ..
Mon – Fri ရဲ့ Happy Hour (1 PM –4PM) အတွင်းဆို Premium Buffet ကို တစ်ယောက် 10000 ပဲကျပြီး Mon – Fri ညနေ4နာရီကနေ ည 10 နာရီအတွင်းဆိုရင် Premium Buffet တစ်ယောက်ကို 12000 ကျပ်ပါတဲ့..
စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ဈေးအတိုင်းပါတဲ့..
Address : ၂၅/၉ ၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
Phone.No : 09441906358 / 09794560321
ရှီXhar ကောင်းကောင်းနဲ့ Private ဆန်ဆန် လွင့်ချင်သူတွေအတွက် ဒီဘားလေးက လုံးဝမသွားမဖြစ်သွားကြည့်သင့်တဲ့ ဘားလေးဗျ
ဒီဘားလေးရဲ့ အဓိကအမိုက်စားကဘာလဲဆိုတော့ Flavor ပေါင်း အမျိုး ၂၀ လောက်တောင်ရှိတဲ့ ရှီXhar တွေပါပဲ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က Ice Pipe တစ်ခါထဲလာချပေးတာ Ice Pipe ဖိုးပေးစရာမလိုဘူး၊ သောက်ဖူးနေကျ တစ်ချို့ ရှီXhar တွေလို မရှဘဲ သောက်ရတာအရမ်း Smooth ဖြစ်တယ် လုံးဝမမူးဘူး
ဈေးကလည်း မကြီးဘူးရယ် Cola Flavor / Orange / Lychee / Geisha ၄ မျိုးက တစ်အိုး 30000 Ks နဲ့ တစ်ခြားကျန်တဲ့ Flavour တွေဆို တစ်အိုး 25000 Ks ပဲရှိတယ် Refills ထပ်မှာချင်ရင် 12000 Ks / 15000 Ks ပဲရှိတယ် ( Heater အတွက်က Free လဲပေးပြီးတာနော် )
အသောက်အပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Cocktail/ Whisky/ Wine/ International Brand Beer မျိုးစုံနဲ့ ဝိုင်ဆို နှစ်ချို့ဝိုင်တွေအပြင် တခြား အမျိုး ၁၀၀ ကျော်လောက်ရယ်နဲ့ Brand ပေါင်းစုံ Whisky တွေလည်း ရှိ‌သေး
စားကောင်းတဲ့ အမြည်းလေးတွေကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင် မိုးကုတ်လက်ဖက်သုပ် – 3000 Ks / အမဲလျှာသုပ် – 5000 Ks/ ဆိတ်သားထောင်း – 5000 Ks/ ကြက်သံပုရာအချိုကြော် – 6000 Ks တွေကတော့ Try ကြည့်သင့်တာလေးတွေပေါ့
Decoration လေးတွေကအစ Cozy ဖြစ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ထိုင်ခုံတွေကလည်း Luxury ဆန်ဆန်ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အပြင် Service ကလည်း5Stars လောက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေမျက်စိကျနေတဲ့ ဘားသစ်လေးဆိုလည်း မမှားဘူး သူက ရန်ကုန်မှာတင်မဟုတ်ဘူး မန္တလေးမှာပါ နာမည်ကြီးတဲ့ ဘားတစ်ခုမလို့ အမြန်ဆုံးလေးသွားကြည့်သင့်နေပြီနော််
Address : သစ္စာလမ်း နှင့် ပါရမီလမ်းကြား ( သစ္စာလမ်းအနီး ) ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးပေါ် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Opening Hour : 4:30 Pm ~ 2:00 Am
Phone.No: 09-662288686, 09-780804965
ရှူးရှူးရှဲရှဲ အာပူလျှာပူတွေကိုမှ ကြွေတာဆိုတဲ့ ဘေဘီလေးတို့အတွက် ဝိုင်းဝိုင်းလည်ဆိုတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက လုံးဝကွက်တိပဲ
မြိတ်ဒေသအစားအစာတွေနဲ့ ရာသီပေါ်အစားအစာကောင်းကောင်းတွေရတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့
မြိတ်ကတ်ကြီးကိုက်နဲ့ မြိတ်မုန့်ဟင်းခါးကတော့ သူတို့ဆိုင်ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ စားလို့အကောင်းဆုံးလေး ၂ ခုပေါ့ အထောင်းနဲ့ ဒေသအစားအစာလေးတွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားကောင်းတာလေးတွေကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
မြိတ်ဒေသထွက် ဘေသီးကို ငါးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ပြန်ပေါင်းထားတာမို့ နူးညံပြီး ချဉ်စပ်လေးနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဘေသီးငါးပေါင်း (ဈေးက ငါး အရွယ် အစားပေါ်မူတည်ပြီး 7000 ကနေ 12000 Ks ထိရှိတယ်တဲ့)
ကြက်ဥထဲကို ကမာကောင်လေးတွေရောမွှေပြီး အချိုကြော်လေးကြော်ထားတာလေးက ထမင်းလေးနဲ့တွဲစားရင် အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ ကမာကြက်ဥကြော် – 4500 Ks နဲ့ ရှားပါးပေတီးလေးကို အချိုပွဲ အနေနဲ့လုပ်ထားပြီး ဝါးလိုက်တိုင်း ထုပ်ထုပ်လေးနဲ့ ရင်ကို အေးနေစေတဲ့ ပေသီးသုပ် – 2000 Ks မင်မင်သဘောကျမိတာလေးပေါ့
ဝါးပလုတ်ဖျော်ရည်၊ ချဉ်ပေါင်ဖူးဖျော်ရည် နဲ့ ဆွေကော်ချားဖျော်ရည်တို့လို အရသာထူးထူးခြားခြားနဲ့ ဆိုင်တိုင်းမှာမရနိုင်တဲ့ ရာသီပေါ်အအေးလေးတွေလည်းရသေးတယ် Delivery ဆိုရင်လည်း ဆိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဆိုရင် Free ပို့ပေးပြီး O2O Delivery နဲ့လည်းချိတ်ထားပါသေးတယ်တဲ့
Address : အမှတ် 153/A ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးပေါ် (လေးထာင့်ကန်လမ်းနှင့် ပြည်သာယာမီးပွိုင့်ကြား) ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်
Opening Hour : 9:00 AM ~ 10:00 PM
Phone.No : 09 251 600 001
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hang out လုပ်ရင် အစားကောင်းလေးတွေစား အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ရတာမျိုးကိုမှ သဘောကျတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီခန့်ငြားထည်ဝါတဲ့ ပန်းပုရုပ်ကြီးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ Café Culture ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးဆီသာသွားဗျို့ …..
ဒီဆိုင်လေးမှာက European Food နဲ့ Chinese Food တွေရယ် ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေရယ်ရတယ် ပီဇာ နဲ့ မာလာရှမ်းကော ကတော့သူ့ဆိုင်မှာ အဓိကနာမည်ကြီးတာလေးပေါ့။ Pizza တွေတော်တော်စုံစုံလေးရပြီး ဈေးကလည်းတန်တယ် Seafood Spicy Pizza – 8500 Ks ကတော့ မင်မင်သွားတိုင်းစားဖြစ်တာလေးပေါ့
မာလာရှမ်းကောဆိုလည်း Set လိုက်လေးတွေရတယ် အသီးအရွက်နဲ့ဆို 4000 Ks / ကြက်/၀က် ဆိုရင် 6000 Ks နဲ့ Seafood နဲ့ဆိုရင် 8500 Ks ပဲရှိတယ် .. တစ် Set ကို ၂ ယောက်လောက်တော့ အေးဆေးစားလို့ရတယ် add-on အနေနဲ့လည်း ကြိုက်တာထပ်ထည့်လို့ရသလို À La Carte အနေနဲ့လည်းမှာလို့ရတယ် တော်တော်လေးစားကောင်းပြီး ဈေးလည်း တန်တယ်
နောက်ထပ်စားကောင်းတာလေးတွေဘာရှိလဲဆိုရင် Tomyum Pasta(Seafood) – 4500 Ks ကြက်တောင်ပံကြော် – 4000 Ks နဲ့ တုန်ယမ်းဟင်းချို(ပွဲသေး) – 3000 Ks လေးတွေကတော့ မင်မင်အကြိုက်တွေ့တာလေးတွေပေါ့ Shave Ice – 2400 Ks လေးကလည်း ကြိုက်လွန်းလို့ ခဏခဏသွားစားဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့
Hot Coffee/ Ice Coffee/ Chocolate & Milk/ Tea/ Italian Soda/ Smoothie/ Fresh Juice နဲ့ Cold Dessert တွေလည်း တော်တော်စုံစုံလေးရတယ်
Delivery ဆိုရင်လည်း Food Mall နဲ့ O2O တို့နဲ့ချိတ်ထားပါတယ်တဲ့
Address : No.68/A , Parami Road ,4Ward , South Okkalapa Township
Phone. No : 09791111219 / 09261111219
‹ ကြားဖူးနေကျ ကိုရီးယားဟင်းလျာမျိုးစုံကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မရနိုင်သေးတဲ့ အရသာမျိုးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Bulgogi Brothers Myanmar
သင်္ဃန်းကျွန်းက Foodie တို့အတက် နှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုအောင်သွားစားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးများ ›